Ngoko ke, ndifuna ukwenza efanayo prank ngenxa yam isiqhagamshelanisi — izakuba ngakumbi igazi kwaye in real time, hayi ividiyo, kwaye ke izakuba ngu super fucking creepy.
yena kodwa kuza t nkqu betha na enkulu arteries kwi-neck. kufuneka sika phantsi hinge ye-jaw ukubetha eyona nto artery ukuqinisekisa ukuba babe khululekanga ngaphandle baze bafe Iibhonasi kodwa funny. ukuba ibingu real igazi ingaba gush ngaphandle na amanzi kuwa yokutshiza. yena uya kuba ubambe yakhe neck gasping kuba zezulu bekuya kuthabatha okanye ngoko ke imizuzwana phambi kokuba yena ngokupheleleyo iphumeza ngaphandle.
thumbs phezulu gcina e kuyo
Ngokwenene, igazi akubonakali t yokutshiza ngaphandle xa ukusika, ngolohlobo. Ukuba kwaba i-fast stab ukuba punctured i-jugular kunye ngokwaneleyo umkhosi, abanye babe squirt ngaphandle. Kodwa ukusika umntu s neck ngolohlobo ngokuqhelekileyo wenza ngayo ukuba nje iitshati ngaphandle kwaye abanye ezininzi i-neck. Kwaye ewe, ndiyazi le nyanga ubudala izimvo, kodwa andikhathali. Kukho omnye mpazamo kwi-prank xa umntu aph yakho neck kubekho ngenene ngakumbi igazi esiza ngaphandle wound nje kancinci tip sika kwi-vid akuvumelekanga a deadly wound nje kancinci sika ukuba uphilisa esihle kakhulu kwaye ngokukhawuleza nganye-nganye? funny vid i-lol elihle ndava uxolo kuba omnye dude yena jonga ezibuhlungu kwaye wayesele bekhala ndandisele akukho fucking indlela kodwa ke mna kokuba oko kuza wathi kwaba a joke kokuba ifumene mad fucking kunye ophilayo kuba get kum uthixo ndiza nje ekubeni fun. Mna ndawufumana njani yenza iibhonasi isishwankathelo kunye wam pant kwaye izihlangu nje qiniseka ukuba xa ufuna beka phantsi kwayo bonisa nesiqingatha okokuba s akukho Jeff udibanisa newbs ukuba waba eqhelekileyo murderer ok Jeff sibulala kwi-umandlalo ok ndithetha Jeff sits ngomhla wakhe ekujoliswe kuyo ngexesha alele kwaye stare e kwabo umhlaba baya wake ne-a knife kwi zabo chests xa sukuba wake yena sijongana ngomlomo wabo kwaye uthi UYE KULALA kwaye sibulala kwabo aze ahambe. get ukuba ur intloko newbs kwaye yiya ukukhangela phezulu bakhe ibali lokwenene ke kwaye iimboniselo ngolohlobo kwi creepy pasta s iphepha le web. Ndiza kuvuma mna probs scream kwaye cinezela elandelayo iqhosha scared ukubona into eyenzekileyo lol nkqu nokuba ndibe nokwazi malunga ezi uhlobo pranks isiqingatha i-boys asikwazanga nkqu thabathani seriously ntoni ukuba NGENENE eyenzekileyo. stupid morons kuphela girls wathabatha ke ezinzima kwaye njenge odd boy ke ukuba andizange ndabona real throat ukusika.
nkqu ukuba kuqala kubekho inkqubela ngu SOOO cited. Hayi nyani, nkqu nangona mna wouldn t believe kwaba real, ihlala ingu kakhulu chilling, kwaye ndiza kuba kule kwi-ngokusebenzisa shock imizuzwana embalwa, efana kakhulu abantu vid. stupid shit, lol akukho namnye ingaba ucinga oku real, yiyo bonke abo boring reactions. kwaye bonke abo utywala ngokwenza lo shit yonke imihla ke lol
← Intshayelelo unxibelelwano